वर्षायाममा खानुपर्छ यस्तो खानेकुरा | सुदुरपश्चिम खबर
वर्षायाममा खानुपर्छ यस्तो खानेकुरा
अत्यासलाग्दो गर्मी लगत्तै आउने वर्षायामको मौसम त रमाइलो नै हुन्छ । तर वर्षायामले सुन्दर र रमाइलो मौसम मात्रै लिएर आउँदैन ।
वर्षायाममा तपाईले नचाहेको स्वास्थ्य समस्याले तपाईलाई सताउन पनि सक्छ । यस ऋतुमा खासगरि रुघाखोकी, चिसो, पखाला र फ्लु जस्ता समस्याले तपाईलाई सताउन सक्छन् ।
तपाईले विशेष सावधानी राखेर आफ्नो खानामा सुधार गर्नुभयो भने तपाईले यस मौसममा आफूले चाहेको जस्तो खुसीयाली पाउन सक्नुहुन्छ । यसको लागि तपाईले आफ्नो खानामा थोरै परिवर्तन गरेर आफ्नो पाचन प्रणालीलाई सजिलो हुने खाना खाँदा उपयुक्त हुन्छ । यस्तै तपाईले आफ्नो मेटाबोलिक स्तरलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ ।
यी हुन वर्षायाममा तपाईले आफ्नो खानामा समावेश गर्नुपर्ने १० चीज
एन्टिअक्सिडेन्टले भरिपूर्ण लसुन प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन उपयोगी हुन्छ । साथै, यसले तपाईको पाचनप्रणालीलाई सजिलो बनाउँछ र मेटाबोलिक रेट घट्न दिँदैन । तपाईले आफ्नो खानामा लसुनको पोटीलाई थिचेर राखेमा त्यसले खानाको स्वाद पनि बढाउँछ र स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्छ ।
वर्षायामको बारेमा सोच्दा धेरैको दिमागमा सबैभन्दा पहिले अदुवाको चिया दिमागमा आँउछ । अदुवाको आगो जस्तो प्रकृतिले तपाईको मुड पनि ठिक बनाउँछ र तपाईको मेटाबोलिजमको स्तर पनि बढाउँछ । ताजा अदुवा एक कप तातोपानीमा राखेर त्यसमा एउटा कागती थिच्नुहोस् । त्यसमा एक चम्चा मह थपेर सेवन गर्नुभयो भने यसले धेरै राम्रो गर्छ ।
नास्पातीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने गुणको बारेमा धेरैले चर्चा गर्दैनन् तर यो धेरै कमालको फल हो । यो स्वादिलो फलमा भिटामिन मिनरल्स अत्याधिक प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले तपाईलाई रोगहरुबाट बचाउँछ ।
यसमा कपर भिटामिन सी र भिटामिन बि१२ पनि प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसले शरीरलाई चिस्याउने भएकाले ज्वरो कम गर्न पनि सघाउँछ । त्यसैले वर्षायाममा दैनिक एक गिलास ताजा नास्पातीको जुस पिउने वा केही टुक्रा नास्पाती खाने गर्नुहोस ।
मसलाको रुपमा प्रयोग हुने यो पहेँलो धुलो प्रतिरोधी प्रणाली बढाउनको लागि धेरै नै उपयोगी हुन्छ । यो प्राकृतिक एन्टिसेप्टिक र एन्टिवायोटिक एजेन्ट पनि हो । त्यसैले तपाईलाई रुघाखोकी वा ज्वरो खाएको बेलामा दुधमा बेसार मिसाएर पिउने सल्लाह दिइन्छ ।
बेसारले रगतमा सुगरको लेभल नियन्त्रण गर्न पनि सघाउँछ । वर्षायाममा बिरामीबाट बच्न एक गिलास दुधमा आधा चम्चा बेसार र एक चम्चा मह राखेर खानुहोस् ।
आफ्नो अमलेट, सुप वा खिचडीमा थोरै मरिच राखेर खाने गर्नुहोस् । यो पिरो कालो दाना स्वादिलो मात्रै हुँदैन यसमा स्वास्थ्य राम्रो बनाउने धेरै गुणहरु पनि हुन्छ ।
ज्वरो खोकी चिसो मांसपेसीको समस्या जस्ता बिरामीको प्राकृतिक औषधी हो । तपाईले आफ्नो खानामा यसलाई राख्नुभयो भने त्यसले धेरै राम्रो गर्छ । आधा चम्चा मरिचको धुलो, आधा चम्चा नै बेसार दुइ चम्चा मह र दुध मिसाएर खानुभयो भने त्यसले तपाईलाई धेरै राम्रो गर्छ ।
बदाम प्रोटिनको धेरै राम्रो स्रोत हो । थोरै चिल्लो हुने बदाममा स्वास्थ्यको लागि लाभदायक धेरै खालका पोषकतत्वहरु पाइन्छ । स्वादिलो बदामले तपाईको पाचन प्रणालीलाई सुधार गर्छ , सुगर लेभल नियन्त्रणमा राख्छ र विभिन्न रोगहरु लाग्नबाट बचाउँछ । नियमित केहि बदाम भिजाएर खानुहोस् ।
वर्षायामको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने दैनिक एउटा स्याउ खाएमा डाक्टरको जरुरत नै पर्देन भन्ने भनाइ मेल खान्छ । आफ्नो सन्तुलित र स्वस्थ खानाको हिस्साको रुपमा दैनिक एउटा स्याउ खानुहोस् । तपाईलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउने धेरै थरि तत्वहरु स्याउमा हुन्छन् । यसले तपाईको पाचनप्रणालीलाई राम्रोसँग काम गर्न पनि सघाउँछ ।
अनारमा विशेषगरि भिटामिन सी पाइन्छ जसले तपाईको शरीरमा भएको प्रोटिनलाई राम्रोसँग काम गर्न सघाउँछ । यसले तपाईको पाचनप्रणालीलाई स्वस्थ र सफा बनाउँछ । साथै यसले तपाईको प्रतिरोधी प्रणाली राम्रो बनाउँछ र तपाईलाई विभिन्न रोगहरुबाट लड्न सघाउँछ ।
यसमा विभिन्न पोषक तत्वहरु, भिटामिन र मिनरल्सहरु हुन्छन् । साथै थोरै क्यालोरीको हुन्छ र शाकाहारी मानिसको लागि झनै उपयोगी हुन्छ । तपाईले दैनिक एक गिलास चुकन्दरको जुस पिउन सक्नुहुन्छ र वर्षायामको समयमा आफ्नो स्टामिना ताजा बनाउन सक्नुहुन्छ ।
वर्षायाममा तपाईलाई स्वस्थ्य राख्नको लागि पानी सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिज हो । धेरै मानिसको चिसो मौसममा पानीको मात्रा घटाउने चलन हुन्छ तर, यसले तपाईलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा पार्न सक्छ । दिनमा कम्तीमा पनि ८ गिलास पानी पिउनुहोस् । साथै आफ्नो मेटाबोलिजमलाई कायम गर्न तातो पानी पिएमा झनै राम्रो ।
वर्षायाममा कस्तो खाना खाने ?
१. नास्पाती, अनार, आँप, अम्बा, स्याउ जस्ता फलफूल धेरै खानुहोस् ।
२. सोडियम कम हुने खानाहरु खानुहोस जसले तनाव र शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने समस्या घटाउँछ ।
३. आफ्नो खानामा जौ, गहुँ र ओट्सहरु समावेश गर्नुहोस् ।
४. पानी धेरै हुने खाना भन्दा सुख्खा खानाहरु आफ्नो खानामा समावेश गर्नुहोस् ।
५. दहि, दुध र बटर धेरै खानुहोस्
६. खानामा तितो सागसब्जी र जडिबुटी जस्तै करेला, निम समावेश गर्नुहोस् ।
७. माछामासु र गोलभेडा कम खानुहोस्
८. चिया पिउँदा जडिबुटी युक्त चियाहरु पिउनुहोस् । अदुवा, ल्वाङ, मरिच जस्ता चिजहरु चियामा मिसाउन सक्नुहुन्छ ।
९. हरियो पात हुने सागसब्जी कम खानुहोस् ।
१०. आइसक्रिम जस्ता चिसो खानेकुरा नखानुहोस्, बरु घरमै बनाइने सुपहरु पर्याप्त खानुहोस् । अनलाइनखबर बाट सभार